Weerar ka dhacay Gobolka Baay & Khasaaro ka dhashay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Weerar ka dhacay Gobolka Baay & Khasaaro ka dhashay
Faah faahino dheerad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan weeraro sababay khasaaro kala duwan oo lagu qaaday Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee ku sugan Gobolka Baay.
Xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar qaraxyo ah ku qaadeen Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka amba baxay Baydhabo kuna sii jeeday dhanka Dooloow,isla markaana weerarkaas uu sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed walow faah faahin rasmi ah aan laga helin.
Dhinaca kale wararka laga helayo degaano ka tirsan Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaan in Gaadiid ay la socdeen Ciidamo Itoobiyaan ah weerar lagu qaaday xilli ay marayeen degaanka Kurtaale oo ku dhow degaanka Yurkud.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dagaal socday in ka badan Saacad uu dhexmaray Ciidamada Itoobiya iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab,waxaana la sheegay in dagaalkaas uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada weerarada qaraxyada iyo dagaalka tooska ah ayaa Baraha Internetka ee taageera waxaa lagu daabacay inay dileen ilaa 10 askari oo ka tirsan Ciidamada Itoobiya,walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada deegaanadii lagu dagaalamay ay tahay mid degaanka,isla markaana Ciidamada Itoobiya ay socdaalkoodii sii wadeen.
Weerar ka dhacay Gobolka Baay & Khasaaro ka dhashay was last modified: June 16th, 2020 by Admin